Imisaad ku bixin lahayd la casheynta qof caan ah? - Wargane News
Home World News in Somali Imisaad ku bixin lahayd la casheynta qof caan ah?
Ra’isulwasaarihii hore ee Britain David Cameroon ayaa ku sugan dalka Shiinaha, halkaas oo uu kaga qeybgalayo shirweyne caalami ah, balse ganacsatada shirka ka qeybgalaya ayaa la sheegay in qofkii doonaya in uu sawir la galo ama la casheeyo David Cameroon ay tahay in uu bixiyo lacag dhan $16 kun doolar .
Arrintan waxaa lagu xayaysiiyay boggaga baraha bulshada ee Shiinaha iyo waliba bogga shirweynaha.
Cameroon ayaa hormuud ka ah hindisaha maalgashiga Shiinaha iyo UK, waxaana lagu wadaa in uu la kulmo madaxweynaha dalkaas Xi Jinping.
David Cameroon ayaa Britain Ra’isulwasaare ka ahaa intii u dhaxaysay 2010-kii illaa 2016-kii xiligaas oo uu xilka isaga dagay kadib markii xisbigiisa uu ku guuldaraystay afti laga qaaday dadka oo lagu weeydiinayay in ay Midoowga Yurub kasii mid ahaanayeen in ay ka baxayaan, waxayna u codeeyeen in ay ka baxaan Midowga Yurub.